Somalia online: War Deg Deg Ah Xarakada Al-Shabaab oo cayrisey haya'daha gargaarka.
War Deg Deg Ah Xarakada Al-Shabaab oo cayrisey haya'daha gargaarka.
Wararka Naga soo gaarayo Gobolada Al-Shabaab ka taliyaan ayaa sheegaya in Qaar kamid ah goboladaasi ee Xarakada Al-Shabaab gudaha u galeen Xafiisyadii ee Maanta ka manuuceen Deegaanada ee ka taliyaan.
Cutubyo katirsan Ciidamada Al-Shabaab ayana gudaha u galay ilaa hadana ugu jira Xafiiskaya Qaar kamid ah 16-Hey'adood ee Maanta ka manuuceen Howlihii Shaqo ee ka wadeen Gobolada ee Shabaab kataliyaan.
Hey'adaha ee Xafiisyadooda Al-Shabaab galeen ayaa waxa kamid ah Hey'ada UNICEF ,WHO iyo hey'ada Concern oo kutaala Magaalada Marka halkaas ee ka qaateen qalabkii Hey'adahaasi ku hool galayeen.
Al-Shabaab aya asidoo kale Gudaha u galay Hey'ada GTZ oo kutaala Magaalada Diinsoor Hady'ada DRC iyo Hay'adda SAHSP oo kutaal Magaalada Jowhar kana shaqeyn jirtay Xanaanada Xoolaha,.
Dad goob joogayaala ah oo kusugan Gobolada Hiiraan ,Bay ,Bakool ,Shabeelaha Hoose ,Shabeelaha Dhaxe ee ku arkeen Al-Shabaab oo gudaha ugu jira Xafiisyada Hey'adaha la manuucay ee Goboladaasi kuwaa ee ka rarteen Dhamana agabyadii hey'adahaasi.
Dadka Goob joogayaasha ayaa ku waramay in ee arkeen gawaaro badan oo Al-Shabaab lahayaeen kuwaa ee ka buuxeen alabao badan ee kujireen Cumputero kuna gurayay Saldhigyo ee Al-Shabaab lahaayeen
Al-Shabaab ayaa Maanta Deegaanada ee kataliyaan Maanta waxa ee ka manuuceen ilaa 16-Hey'adooda oo isugu jira kuwa Caalami ah iyo kuwa Local ah kuwaa oo kala ahaa.
1- Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
2- World Health Organisation (WHO)
3- United Nations Children’s Fund (UNICEF)
4- United Nations Population Fund (UNFPA)
5-United Nations Office for Project Services (UNOPS)
6- Food Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU)
7- Norwegian Refugee Council (NRC)
8- Danish Refugee Council (DRC)
10- Norwegian Church Aid (NCA)
11- Cooperazione Internazionale (COOPI)
12- Swedish African Welfare Alliance (SAWA)
13- German Agency For Technical Cooperation (GTZ)
14- Action Contre la Faim (ACF)